Na-atụ aro akwụkwọ edemede | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Na-atụ aro akwụkwọ edemede
Carmen Guillen | | Ule
Ọ bụrụ na enwere ụdị akwụkwọ masịrị m n'ezie mana ọ dị nwute na enweghị m oge iji gụọ, ọ bụ ya nwalee. Gịnị mere m ji sị na ọ naghị esiri m ike ịgụ ha? Ọfọn, n'ihi na m na-eji ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nduzi:
Mụ na ha na-anọkarị karịa ka m na-ewepụta otu akwụkwọ nkịtị.
Ọ na-amasị m ịgụ ha nwayọ, na-ede ọmarịcha echiche dị iche iche onye ode akwụkwọ nwere, na akwụkwọ edetu dị iche ma ọ bụ n'akụkụ akwụkwọ ahụ.
M na-agwa ha ihe, mgbe ụfọdụ, e nwere iberibe akwụkwọ m gụrụ ma gụghachi ọtụtụ ugboro.
Achọrọ m akwụkwọ edemede dịka isiokwu nke akwụkwọ m na-agụ n’oge ahụ, wdg.
N'agbanyeghị nke ahụ, achọghị m ịkwụsị ịtụ aro ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndị a dị oke ọnụ taa ma na-enye ọtụtụ ihe iji kwuo maka (ụfọdụ karịa ndị ọzọ).
1 "Schoollọ akwụkwọ nke ụwa dị ala" (Eduardo Galeano)
2 "Usoro ọmụmụ nke omume" (Friedrich Nietzsche)
3 "Akụkọ banyere aha ọjọọ banyere ụwa" (Jorge Luis Borges)
4 "N'ihi na obi ụtọ nke na-agụ" (Juan Cruz Ruiz)
5 "Akwụkwọ na nnwere onwe" (Emilio Lledó)
"School ụwa isi ala" (Eduardo Galeana)
Author: Edward Galeano
Isi ederede: Narị afọ 2005, XNUMX
Otu narị afọ na iri atọ gara aga, mgbe Alice gachara Wonderland, ọ banyere n’ime enyo iji chọpụta ụwa dị n’okpuru. Ọ bụrụ na a mụrụ Alice ọzọ n’oge anyị, ọ gaghị adị mkpa ịgafe enyo ọ bụla: ọ ga-enyerịrị windo anya. Na ngwụcha nke puku afọ, ụwa a gbadara agbada na-ahụ: ọ bụ ụwa ka ọ dị, site n'aka ekpe gaa n'aka nri, otube na azụ yana isi n'ụkwụ.
"Usoro ọmụmụ nke omume ọma" (Friedrich Nietzsche)
Isi ederede: Mmekọrịta, 2011
Usoro ọmụmụ nke omume bụ ọrụ Friedrich Nietzsche kachasị njọ ma sie ike. Akwụkwọ edemede mbụ ya metụtara ọdịiche dị n'etiti echiche nke "ihe ọma" na "ihe ọjọọ", yana mgbanwe nsụgharị ha pụtara site na ọrụ ntụgharị asụsụ Judeo-Christian. Akwụkwọ nke abụọ na-enyocha ajọ akọ na uche, nke kpatara ya n'oge gboo bụ amamịghe aghọtaghị n'echiche nke ibu ọrụ nke omume, kama dịka ụgwọ nke ihe onwunwe. Akụkụ ikpeazụ, na-ekwupụta ọkwa ọhụrụ nke onye isi, na-enyocha ihe asceticism pụtara.
"Universal akụkọ ihe mere eme nke aha ọjọọ" (Jorge Luis Borges)
Isi ederede: Akara, 2004
Akụkọ asaa ndị mejupụtara Historia global de la infamia wepụtara akụkọ ndụ na akụkọ sitere na ọdịbendị ọdịbendị na ọdịdị ala dị iche iche iji gbanwee ha, site na iji akụkọ nkọwa na okwu baroque, mee ihe ederede kwesịrị ekwesị. Mpịakọta ahụ gụnyere "Hombre de la Esquina Rosada", otu n'ime iberibe Borges kachasị eme emume, yana "Etcétera", akwụkwọ isii ma ọ bụ glosses nke ọdịbendị dị ịtụnanya nke na-egosi ókèala oghere akwụkwọ ya na-enwu. Akụkọ ihe mere eme nke Universal infamy bụ akwụkwọ nwere ike ịmasị ndị na-agụ ya, ebe ọ bụ na akụkọ niile sitere na ezigbo ndị omempụ.
"N'ihi na obi ụtọ nke na-agụ" (John Cruz Ruiz)
Author: Juan Cruz Ruiz ebe obibi oyiyi
Nkwusa: Tusquets Editores
Juan Cruz na-enye anyị mkparịta ụka ogologo oge banyere ahụmịhe ọkachamara na ndụ ọhụụ nke Beatriz de Moura, onye nchoputa na onye editọ nke Tusquets Editores maka afọ 45. Ọ na-akọghachi mmalite, nsogbu na ihe ịga nke ọma iji wuo katalọgụ ma kwado ya ruo ọtụtụ iri afọ. Na nkenke, a na-adọta trajectial ederede pụrụ iche na ọdịnala anyị, nke amụrụ site na ọrụ, mana site na uto maka ọgụgụ. Kedu ihe mere katalọgụ a ji dị ka nwa agbọghọbịa onye mechara gachaa ịmalite njem ahụ? Akwụkwọ a na-akọwa igodo, ebe ị na-achọpụta ụzọ mbụ mmadụ si dee akụkọ ọdịbendị na omenala n'oge na-adịbeghị anya.
"Akwụkwọ na nnwere onwe" (Emilio Lledó)
Mpịakọta a na-achịkọta ụfọdụ ederede kachasị ederede site n'aka Emilio Lledó n'otu n'ime ngosipụta dị mkpa nke ikike anyị nwere, iji megharịa onwe anyị: akwụkwọ. Akwụkwọ na-echekwa ebe nchekwa, ya na ya, ohere ịpụ, site n ’anya onye ọ bụla na-agụ ya, kpọchiri oge nke ha, n’ime oghere mkparịta ụka, nnwere onwe ha, nnwere onwe ha Akwụkwọ, asụsụ, ncheta, mkparịta ụka, abụ, nnwere onwe: onyinye na-enweghị atụ, maka ịdị adị anyị, maka ịbụ nke anyị kwesịrị ịbụ. Akwụkwọ a na-enyere anyị aka ịghọta ihe ịgụ na ihe maka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Ule » Na-atụ aro akwụkwọ edemede
Akwụkwọ edemede sitere na Planeta de Libros